Philips SBCMD650 Corded Microphone - Black | Buy online | SHOP.COM.MM
Philips SBCMD650 Corded Microphone - Black
ကြိုးမဲ့ ဖြစ်သောကြောင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း
50-15000Hz Frequency response
Philips SBCMD650 Corded Microphone - Black အသံက မအက်ကွဲဘူး ဆိုလို့အရမ်းကောင်းတယ် Read more Hide
Philips ပစ္စည်းဆိုတော့ အရည်အသွေးက စိတ်ချရမှာပဲ။ အိမ်မှာဝယ်ထားပြီး မိုက်ခဲလိုက်တော့မယ်။ Read more Hide
အိမ်မှာသုံးသုံး၊ ပွဲတွေမှာသုံးသုံးအဆင်ပြေတယ်။ အသံလဲကြည်တယ်လေ။ Read more Hide
A durable microphone with metal body and detachable cable for every singing and entertainment occasion.
SBCMD650 Corded Microphone - ?????????
Specifications of SBCMD650 Corded Microphone - Black